Wasaaradda Kalluumeysiga Soomaaliya oo doon casri ah guddoontay – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Wasaaradda Kalluumeysiga Soomaaliya oo doon casri ah guddoontay
By Maxamed Cismaan / March 31, 2020 March 31, 2020
Muqdisho(SONNA)-Wasaaradda kalluumeysiga iyo Khayraadka badda DFS ayaa doon kalluumeysi oo lagu tababarayo kalluumeystada waxaay maanta kala wareegtay hey’adda Qaramada Midoobay u qaabishan Cunnada iyo Beeraha (FAO).
Doontaan oo cabirkeedu yahay 10.3 mitir oo ay FAO ugu deeqday wasaaradda waxaa sameeyay mashruuca Kaluumeeysiga CCAP oo midawga Yurub uu maal geliyo, waxaana ka faa’iideysanaya waaxda maamulka kalluunka iyo iskaashatooyinka wasaaradda kalluumeysiga si ay u dhisto awoodda shaqaalaha iyo iskaashatooyinka.
Mashruuca kalluumeysiga CCAP oo la billaabay sanadkii 2016 ayaa u jeedada laga lahaa waxay aheyd in lagu xoojiyo qaybta kalluumeysiga dalka iyada oo dhallinyarada loo sameynayo shaqo abuur, la siinayo xirfadaha muhiimka ah iyo qalab ka saacidaya inay noloshooda iyo nolosha qoysaskooda wax ka bedlaan.
Mashruuca oo kaashanaya wasaaradaha kalluumeysiga DFS iyo dowlad gobaleedyada ayaa ku guuleystay in dhallinyaro badan loo tababaro hannaanka kalluumeysiga iyo hababka casriga ah ee loo kalluumaysto, sidoo kalana siiyay doomo ay ku jillaabtaan, arrintaas oo waxbadan kusoo kordhisay xirfadooda, agabkooda iyo waxsoosaarkooda dhinca kalluumeysiga, horumuudna u noqotay inay qayb ka qaataan kobcinta dhaqaalaha dalka.
Doonta ay maanta wasaaraddu la wareegay ayaa qayb ka ah agabka kalluumeysi oo wax lagu tababaro oo FAO ay ka qaybsisay dalka ayaa qayb ka qaadaneysa horumarinta xirfadda Kalluumeysatada iyo iskaashatooyinka, taas oo qayb ka ah hagaajinta guud ee qeybta kalluumeysiga dalka.
Hay’adda FAO ayaa 24 doonyood oo cabbirkoodu kala yahay 7.5 iyo 8.3 waxay ku wareejisay wasaaraddaha kalluumaysiga dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada Hirshabelle, Koonfur Galbeed, Puntland iyo Galmudug sanadkii 2019 iyo billaawga sannadkaan 2020, waxaana loo qaybiyay iskaashatooyinka kalluumaysatada ee xeebaha Soomaaliya.